Indawo ezigcina iinkcukacha zeComputacenter
Thenga iComputacenter yokuKhula ngeXabiso eliXabisekileyo
Ukuhlaziywa: 17 May 2021
IComputacenter (CCC) yinkampani yeziseko zophuhliso ze-IT egxile ikakhulu kwiimarike zaseYurophu, ezinesiseko sasekhaya e-UK, esizisa inzuzo engaguqukiyo.
Inziwe ngemali eyi- $ 3 yezigidigidi, inkampani inenzuzo enkulu ngembuyekezo kwi-equity eqeshwe ngama-26% kunye nerekhodi yomkhondo wokukhula kwemali okhululekileyo simahla kule minyaka imbalwa idlulileyo.
Kodwa ngaphandle kwezi zinto zinomona, inedumela kwindawo yentengiso njengeyona nto iphantsi 'kwebhokisi yokutshintsha'. Kodwa iintsuku apho konke ebikwenzile ibingumthombo kunye nokufaka ikiti yeefemu kudala zadlula, njengoko kungoku ilifu kunye nokhuseleko kwezoshishino nazo-iindawo ezinkulu zokukhula zihamba phambili zinemiphetho ebhetele ngakumbi kuneshishini lazo lokuqala.
Kwakhona, ubunzima obubandakanyekayo kutshintsho lwe-hybrid, ukusebenza kwedijithali ye-agile kufuneka ibone inkampani ibekwe kakuhle ukuze izisebenzise kulo mkhwa.
Kodwa ngaphandle kolu phuhliso lukhuthazayo lokuba inkampani iqhubele phambili inzuzo, iya ithathelwa ingqalelo kuba ithathwa ngokuba ingekho kwiindawo ezikhula ngokukhawuleza ze-IT ezinje ngeenkonzo zesoftware, i-e-commerce, uthungelwano lwentlalo kunye nezinye. Oku kuthetha ukuba kuye kwaba kuncinci kakhulu ukuba kuxhomekeke kwiintlobo zokubuyela phezulu ezixhamle kwezinye iindawo zobuchwephesha.
Ukongeza, ilifa layo laseYurophu kunye neemarike zithetha ukuba ayizizo iiradars zabahlalutyi ngendlela efanayo nabazala bayo baseMelika, nangona kufanelekile ukuba uqaphele ukuba ibisenza ukufunyanwa okuthile eMelika mva.
Abona khuphiswano baphambili benkampani ziifemu ezinkulu zokubonisana ezinje ngeCapGemini kunye neAccenture kwelinye icala, kunye nabadlali abancinci abalingana nobukhulu kubo, njengeSoftcat.
Icandelo lokuThengiswa kweTekhnoloji iseyeyona nxalenye inkulu yeshishini, kunye nokusebenza kwayo kwemali-mboleko kunyaka opheleleyo we-2020 ovelisa ingeniso ye- $ 4,180 yezigidi, inyuke nge-9.4%.
IComputacenter yoRhwebo (CCC) e-eToro nge-0% yekhomishini
Iinkonzo zibalwe nge- £ 1,261.2 yezigidi, zenyuka nge-2.5%, ngelixa
Ingeniso yeeNkonzo zobuNgcali inyuke ngeyona nqanaba likhawulezayo- i-16.2 %- ukuya kwi- £ 425.4 yezigidi, nangona lelona candelo lincinci.
IJamani ne-UK zezona ndawo zinamandla kwiinkonzo zobungcali.
Icandelo leeNkonzo zalo eLawulweyo labona ingeniso yehla nge-3.3% ukuya kwi- $ 835.8 yezigidi.
Ngokubanzi, ukuthengisa kukhule ngaphezulu kokuhloniphekileyo kwinqanaba lokukhula komyinge we-12.2% kule minyaka mihlanu idlulileyo.
Ezi ntengiso zikwanazo neziseko eziqinileyo, kunye nabathengi kubandakanya ukuthanda kweBMW kunye neTelefonica, ehambelana nomsebenzi wayo wokujolisa kwiinkampani ezinkulu ezingama-500 kunye neearhente zikarhulumente kurhwebo ngalunye lwelizwe.
Thenga iComputacenter ngokukhula ngexabiso elifanelekileyo
IComputacenter ipasisa i-GARP (ukukhula ngexabiso elifanelekileyo) kuvavanyo, njengoko sinokubona kwixabiso lemetriki.
Ixabiso layo ukuya kwintengiso li-0.54 enomtsalane kunye nexabiso-ukuya kwi-equity ye-19.4 ibeka i-17 kwi-68 kwicandelo layo lezemveliso zesoftware kunye neenkonzo ze-IT; Ixabiso lamashishini kwi-EBITDA yi-9.91, ukuyibeka kwinqanaba eliphezulu kwi-9 kwi-74.
I-CC / i-EBITDA yeCCC ibetha bonke abakhuphisana nayo, kunye neSoftcat, umzekelo, kwi31 kunye neAccenture nge24.4.
IComputacenter ithambekele ekufumaneni isicwangciso sayo sokukhula, ngezona zivumelwano zibalulekileyo kuthengiso lwe-ALBA eJamani kunye neenkonzo ze-BT eFrance. Ikwathengile iTekhnoloji yePivot eMntla Merika.
Inkampani inika ingxelo yokuba ishishini laseMelika, kubandakanya iPivot, liqhuba phambi kokulindelweyo, nangona libonakalisile ukungazinzi kwezinga lotshintshiselwano njengomngcipheko kwimivuzo yaphesheya.
Umdibaniso wenkampani yaseFrance ichazwa njenge "isendleleni" nangona ihlala isenza ilahleko okwangoku.
Inzuzo ngaphambi kwerhafu yayiyi- $ 206 yezigidi, ukuxhuma kwe-35% kunyaka ophelileyo, okukhokelela ekuphathweni kwengxelo kumanani ngendlela efanelekileyo kwizimvo ezihamba neziphumo ze-FY 2020: Kucacile ukuba ukusebenza kwe2020 kudlulile konke okulindelweyo kwaye i-2020 ibone ukukhula okukhawulezayo kwenzuzo IComputacenter iphumelele kwiminyaka yayo engama-22 njengenkampani yoluntu. Ngokucacileyo, umceli mngeni osinika wona kukukhula kwakhona ngo-2021. ”
Ukuhamba ngengeniso yayo, unokubona ukuba kutheni ulawulo luchitha kangaka. Ingeniso yesabelo ngasinye (i-EPS) yi-126p, ikhule rhoqo ngonyaka ukusukela ngo-2015. Ikota yekota yenqanaba lokukhula kwe-EPS ngama-38% kunye neminyaka emithathu ye-eps CAGR ime kuma-27%.
IComputacenter (CCC) itshathi yexabiso leentsuku ezi-1 ngomhla we-17 kuCanzibe. Ngokunyanisekileyo ukuThengisa
Abahlalutyi baseStockopedia bacinga ukuba ezo zinto zithengiweyo zenziwa ngendlela efanelekileyo, emva koko banokuba zizikhuthazi zokukhulisa ezibonelela ngokuqina kokubuyisela isitokhwe.
Ngokwexabiso lamaxabiso, isalathiso samandla esihambelanayo (i-RSI) kumbono wonyaka omnye yi-1% kwaye oko kubonakalisiwe kwimvumelwano yokuthengwa kwabahlalutyi abasixhenxe abagubungela isitokhwe.
Ithagethi yamaxabiso abahlalutyi yi-2736p, elingana ne-4.6% yokunyuka kwixabiso langoku le-2622p.
Ukuba u khangela impahla onamandla okuphepha kunye nokuthengisa okuqinileyo kunye nethemba lokukhula okungaphezulu komndilili, emva koko unokwenza kakubi ngakumbi kunokubona iComputacenter.
Isitokhwe sijongeka sinomtsalane ngakumbi ngokuchasene nemvelaphi yokujikeleziswa kuphuma kwisitokhwe esityebileyo sokukhula kwezobuchwephesha kunye nakwimijikelezo yomjikelo, njengoko amaxhala okwehla kwamandla emali eqhubeka kunye nethemba lokonyuka koqoqosho lwasemva koCovid.
Nangona isitokhwe sobuchwephesha, sesinye esenza iingeniso ngoku, hayi isaphulelo kude kube lixesha elizayo, kwaye inexabiso elincomekayo, ukuba ikho, elincike kwicala elingabalulekanga.
Thenga iComputacenter yokuthenga ixesha elide ukuze uxhamle ekuhlaziyweni nasekukhuselekeni kwimigibe yenkunzi enokuthi ezinye izitokhwe zobuchwephesha zibambe abatyali zimali abangalumkanga.
Thenga izabelo zeComputacenter nge-0% yekhomishini kwiqonga lotyalo-mali lehlabathi eToro.
tags IComputacenter (CCC), Iinkonzo ze-IT, ubuchwephesha betechnology